कोरोनाको प्रभावः व्यापार आधा घट्यो, मूल्य बढ्यो | सुदुरपश्चिम खबर
कोरोनाको प्रभावः व्यापार आधा घट्यो, मूल्य बढ्यो
कोरोना भइरसले होटल व्यवसायमा देखिएको मन्दीको असर खाद्यान्न पसलमा देखिएको छ। होटलको व्यापार घटेपछि खाद्यान्नको माग कम भएको हो। खासगरि फलफूल र तरकारीको मूल्यमा वृद्धि भएको छ।
कोरोनाको सन्त्रासपछि ग्रामीण क्षेत्रबाट सहरमा बजार गर्न आउने ग्राहकको संख्या घटेको छ । बजारमा चहलपहल समेत घट्दै गएको व्यापारी बताउँछन्। बुटवल राजमार्गको चौराहास्थित दिपक किराना पसलमा आउने उपभोक्ता आधा घटेको दिपककुमार कसौधनले बताए। ‘बजारमा मान्छे नै देखिएका छैनन्।’ उनले भने, ‘पहिलेको तुलनामा व्यापार आधाले घटेको छ।’
बुटवलको ट्राफिक चोकस्थित चण्डी स्टोर्समा सामान किन्न लाइन बस्नुपथ्र्याे। अहिले खुला छ। ‘१५–२० दिन भयो। ग्राहक कम छन्’, कनैयालाल गुप्ताले भने, ‘सामान किन्न आउने मान्छे आधाभन्दा कम भइसके। होटल र अन्य बजारमा कारोबार घट्दा किरानामा पनि असर पर्छ।’ गाउँका उपभोक्ता बजार गर्न सहर नआएका कारण व्यापार पनि घटेको उनले सुनाए। कोरोनाको त्रासले कालोबजारी बढ्ने र कृत्रिम अभाव सिर्जना हुने उपभोक्तामा त्रास बढे पनि व्यापारीले माग घटेकाले त्यस्तो नहुने दाबी गरे। ‘ग्राहक नै आएका छैनन् भने पनि हुन्छ, भएको सामान नै बिक्री भएको छैन। कसरी अभाव हुन्छ ? ’, गुप्ताले भने, ‘भाउ बढ्ने त कुरै छैन। पहिले जुन दर थियो त्यही छ।’
बुटवल राममन्दिर लाइनमा थोक बिक्रेतासमेत रहेका गौरीशंकर केशरीको पसलमा विगतका वर्ष यतिबेला अघिल्लो दिन होलीको सामान किन्नेको भीड हुन्थ्यो। तराई क्षेत्रमा मंगलबार होली मनाएको छ। होलीका लागि ल्याइएका रंग, अबीर, पिचकारी लगायतका सामान त्यत्तिकै छन्। ‘होलीको समयमा यहाँ मारामार बिक्री हुन्थ्यो। दिनमै एक–डेढ क्वीन्टल अबीर बिक्री हुन्थ्यो’, केशरीले गुनासो गरे, ‘अहिले त पाँच किलो पनि बिकेको छैन। कोरोनाको त्रासले बजार स्वात्तै घटेको छ।’
फलफूलमा कारोबार घटेको भए पनि भाउ बढिरहेको छ। यसरी मूल्य बढेको एक महिना भएको फलफूल बिक्रेता सिमान्त चौधरीले बताइन्। ‘२० हजारसम्मको व्यापार हुन्थ्यो। अहिले तीन हजारको पनि हुँदैन’, उनले सुनाइन्।
मास्क पाउनै मुस्किल
दाङमा मास्कको अभाव देखिएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणको चर्चा हुन थालेपछि दाङमा मास्कको माग बढेसँगै अभाव भएको हो। काठमाडौंमा कोरोना भाइरसका बिरामी फेला परेको खबर सार्वजनिक भएपछि दाङबाट मास्क पठाइएको वितरकले बताए। मास्क बनाउने कच्चा पदार्थ चीनबाट आउने र चीनमै कोरोना महामारी भएर उद्योग नै बन्द भएपछि काठमाडौंबाट मास्क पठाइएको थियो। चीनबाट काठमाडौं र काठमाडौं हुँदै दाङमा मास्क आउने गथ्र्यो। अहिले मास्क आउने सम्भावना एकदमै न्यून छ भने कुनै–कुनै पसलमा स्टकमा रहेका मास्क पनि महंगोमा बेच्ने गरेका छन्।
मास्क सप्लाई गर्दै आएका युनाइटेड साइन्टीफिक एन्ड सर्जिकल हाउसका बालकुमार घर्तीले दुई महिनादेखि नै मास्क आउन छाडेको बताए। ‘हामी नै काठमाडौंबाट मास्क ल्याउँथ्यौं’, उनले भने, ‘अहिले त्यहीँ मास्क अभाव छ, कसरी पठाउँछ ? ’
लन्डनमा हुने सुदूरपश्चिमेलि भेला स्थगित